Vinyl ọ na-eke PPF?-Akụkọ-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
Vinyl ọ na-eke PPF?
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na PPF bụ naanị ụdị ntụgharị nke kechie vinyl ihe nkiri. N'ezie, ha bụ kpamkpam dị iche iche ngwaahịa. Na nkenke, ndị PPF nwere ike chebe agba na-akpaghị aka rụkwaa scratches. Ọ dị mma nke ukwuu na-enweghị ịgbanwe akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala. Nke kechie vinyl ihe nkiri bara ụba na agba ma mara mma nke ukwuu. Ha abụọ nwere uru nke ndị ọzọ na-enweghị. Ya mere, ọ na-esiri anyị ike ịhọrọ. Taa, m ga-atụnyere na nyochaa ha iji nyere gị aka ịghọta ọdịiche dị n'etiti abụọ ahụ.
Kechie ihe nkiri vinyl:$ 100-500.
Ihe kpatara nnukwu ọnụahịa dị iche bụ na ihe dị iche iche.
The kechie vinyl ihe nkiri na-achụso agba na-egbuke egbuke, ihe ya na-abụkarị PVC, na ihe nkiri kachasị mma bụ ihe karịrị 10,000 dollar; mgbe PPF chọrọ nghọta dị elu, na ihe ya bụ PVC na TPU, ya mere oke elu nke ọnụahịa ahụ dị elu.
2. Aesthetic mmetụta
PPF adịghị agbanwe agba nke agba ụgbọ ala, ọ na-egosipụta nke ọma, ma nwee mmetụta abụọ nke ìhè na matte, nke na-eme ka ọnọdụ ụgbọ ala ahụ pụta ìhè; nke kechie vinyl film ekpuchi mbụ ụgbọ ala agba agba, iche iche bụ nnọọ ọgaranya, na otu ika nwere ike ọtụtụ na agba to gosi ihe pụrụ iche wee gosi ụdị mmadụ pụrụ iche.
3. Mmetụta nchebe
PPF na-eguzogide ọkọ . N'ime ha, ihe TPU nwere mmetụta magburu onwe ya n'ichebe agba, ọ pụkwara ịrụzi ozugbo n'elu obere ncha; nke kechie vinyl ihe nkiri nwekwara ike igbochi ncha, ma ọ dịghị mma dị ka nke mbụ, na ọ dịghị ọkọ ndozi ọrụ.